Mayelana NATHI - Dongguan kinda Filtration Equipment Co., Ltd.
Dongguan kinda Filtration Izinsiza kusebenza Co., Ltd.
Eyasungulwa ngonyaka ka-2013, iDonguan Kinda Filtration Equipment Co., Ltd.yinkampani ye-hi-tech egxile ku-R & D, ekukhiqizeni nasekuthengiseni ulwelwesi lokuhlunga kanye nemikhiqizo efanelekile. Ngokuhambisana nombono wokuthi "indawo yokuqala ephezulu, ubuchwepheshe obuphakeme nezindinganiso eziphakeme", sithuthukisa, sigaye futhi simunce ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu kakhulu bokuhlukanisa ekhaya nakwamanye amazwe, sithuthukise amadivayisi amasha ahola izwe lonke, ubuchwepheshe kanye nenqubo enezimele eziningi amalungelo empahla yengqondo futhi ube yilungu le-Membrane Industry Association of China.
Izinto zethu zokusetshenziswa zihlinzekwa abahlinzeki abaziwayo basekhaya nabaphesheya kwezilwandle, abakhethwe futhi bahlolwa kaninginingi ngaphambi kokusetshenziswa. Imikhiqizo yolwelwesi esetshenziselwe i-biomedicine nokudla nesiphuzo konke kuvunyelwe yi-FDA futhi kuhambisana nezidingo zokuhlolwa kokuphepha kwe-USP yakamuva maqondana ne-VI-121C yokuphinda isebenze kwezicubu zomuntu kupulasitiki. Inqubo yokukhiqiza ihambisana kakhulu nezindinganiso zokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO9001 futhi iyenziwa ngokususelwa kubahlaziyi abaphambili ukuze babone ukulawulwa kwekhwalithi yangaphakathi eqinile kunaleyo yokulethwa kwemboni.
Imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka phakathi izihlungi ze-micro-pore ulwelwesi, izihlungi zomoya, nezihlungi zoketshezi futhi zisetshenziswa kakhulu kwi-bio-pharmacy, imboni yamakhemikhali, i-elekthronikhi, ukuvikelwa kwemvelo, amandla, kanye nokuhlolwa kwesayensi kokuhlanzwa, inzalo, ukwahlukana, ukuhlushwa, ukucwengwa ukusabela okukhandlayo, kanye nokuphendula ngokwemvelo kugesi noketshezi. Uma kuqhathaniswa nemikhiqizo ejwayelekile yolwelwesi eyenzelwe ukuhlanzwa, ukwehlukaniswa, kanye nezinqubo zokuphendula, le mikhiqizo ibonakala ngokulula, ukusebenza kahle, ukwethembeka, izindleko eziphansi, ubungani bezemvelo, ubuhlakani, nokusetshenziswa kahle kwamandla, kubonisa imiphetho yokuncintisana.
Eminyakeni eyishumi eyedlule, abantu baseKinda bebelokhu beqaphile futhi benonembeza, benza izinto ngokuningiliziwe, futhi benaba kabanzi ngokuphathwa kukaKinda. Ngenxa yokuphikelela kwethu, asigcini ngokuwina udumo ngomlomo phakathi kwamakhasimende amadala kodwa futhi sithola ukuqashelwa okuqhubekayo kumakhasimende amasha. Ibhizinisi lethu lizinzile futhi liyathuthuka, liyachuma nsuku zonke. Njengamanje, sinamagatsha asungulwe kulo lonke elaseChina, kufaka phakathi iXiamen, Kunshan, Chengdu, neHong Kong, siseva amakhasimende emhlabeni wonke. Ngokuya ngemibono yethu yesevisi kanye neminyaka yokuhlangenwe nakho, futhi ngesilinganiso sethu sokuncintisana kwentengo nokusebenza okuthuthukile kwenkonzo yokuthengisa ngemuva kokuthengisa, siyaqiniseka ukuthi sizokuba umlingani wakho omuhle kakhulu!